Isbaheysiga Sacuudiga oo fuliyay duqeyntii lagu dilay 42 Soomaali ah(Sawiro Calool kugu reebi doono) – Xeernews24
Isbaheysiga Sacuudiga oo fuliyay duqeyntii lagu dilay 42 Soomaali ah(Sawiro Calool kugu reebi doono)
18. März 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Warar dheeraad ayaa kasoo baxaya 42 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo lagu dilay dooni ay saarnaayeen oo ka ambabaxday xeebaha dalka Yeman, kuna sii jeeday dalka Sudan.
Duqeynta lagu dilay qaxootigaan Soomaaliyeed ee ka baxsanayay dagaalada Yeman ayaa waxaa la sheegay in ay geysatay mid ka mid ah diyaaraddaha Helicopterada isbaheysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga.
Wakiilo ka socda ururka socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegay in qiyaastii 80 qaxooti ah la soo badbaadiyey, islamarkaana loo qaaday magaalada Xudeyda.
Sarkaal dhinaca ammaanka qaabilsan oo ka tirsan Yeman ah ayaa lsheegay inay duqeynta geysteen isbaheysiga Sacuudiga ee dagaalka kula jira Xuuthitiyiiinta, iyadoo weli aysan wax war ah kasoo saarin isbaheysiga Sacuudiga.
Mucaaradka Xuutiyiinta Yemen ayaa ku eedeeyey isbaheysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo inay fuliyeen weerarka. Isbaheysiga ayaa dhowaanahan duqeymo culus ku waday magaalada Xudeyda, ayaga oo ku eedeeyey mucaaradka shiicada inay hub kasoo geliyaan.
Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Cadan Axmed Cabdi Xassan (Axmed Suudaan) oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadka dhintay ay Soomaali yihiin, isla markaana dowladda Soomaalia war ka soo saari doonto cidda ka danbeysay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/yeman-somali-dilay-2.jpg 405 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-18 00:16:112017-03-18 00:16:11Isbaheysiga Sacuudiga oo fuliyay duqeyntii lagu dilay 42 Soomaali ah(Sawiro Calool kugu reebi doono)
Ma ogtahay in Roob yaraanta dhulka Somalida Saameyn ku leeyahay Dhulka Xabashidu?... Uhuru Kenyatta oo socdaal qarsoodi oo aan Soomaaliya waxba laga ogeynsiin ku...